HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid oo garaacday Granada dibna ugu soo laabatay kaalinta labaad
May 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Kooxda Real Madrid oo booqasho ugu tagtay Granada kulan ka tirsan Horyaalka La Liga ayaa ka gaartay guul muhiim ah ciyaar ku soo dhamaatay 1-4 gool xili lagu ciyaarayay garoonka Nuevo Los Carmenes.
Real Madrid oo kulankan mumiimad gooni ah u lahaa ayaa u suura gashay in qeybta hore ay hesho labo gool waxana goolasha u dhaliyay Luka Modric daqiiqadii 17aad ee ciyaarta halka goolka labaad uu u saxiixay Rodrygo kaasi oo kubad qurux badan kasoo jiitay dhanka midig ka hor inta uusan dhinac ka dhigin goolhayaha Granada qeybta hore ayaana lagu kala nastay labadasi gool.
los blancos ayaa heshay fursado muhiim ah qeybta danbe kuwaasi oo ay qasaarisay waxana daqiiqadii 71aad u suura gashay Granada in ay dhaliso gool kaasi uu u saxiixay Jorge Molina isagoo goolhaya dib ugu celiyay kubad uu soo tufay.
Real Madrid ayaana heshay goolkeeda 3aad ee ciyaarta kadib markii uu dhameestiray kubad banaanka loo soo dhigay Alvaro Odriozola daqiiqadii 75aad ka hor inta uusan goolka 4aad ku darsan Karim Benzema oo ka faa’ideestay kubad uu qalad ku sameeyay goolhayaha Granada oo banaanka u soo baxay guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-4.
Guusha Los Blancos ayaa ka dhigan ay dib ugu soo laabato kaalinta 2aad ee horyaalka iyadoo leh 78aad dhibcood halka Granada ay ku jirto kaalinta 10aad iyadoo leh 45 dhibcood.